Nhau - Nhanganyaya kuPe yemvura pombi
Nhanganyaya kuPe mvura yekupa pombi
Polyethylene nebwe sezvo huru mbishi zvinhu acho, pashure extrusion Kuumbwa mvura wedzera polyethylene nenyere anonzi Pe mvura pombi.
Pe mvura pombi yekugadzira michina?
Germany Como yekugadzira mutsara. Iyo michina inogadzirwa neepamberi tekinoroji yepasirese, ine yakakwira kumhanya extrusion kuumba, zvine mwero kunyunguduka, otomatiki sizing yekucheka, PLC kutonga kweyekugadzira maitiro epamberi mashandiro.
PE pombi pakuitwa kwechiyero?
National standard GB / T 13663-2000.
Chii chiri chepamusoro pevara repombi yemvura ye PE
Ruvara rwepamusoro nderwe nhema, uye vashoma vanoda chena. Iyo nhema chubhu ine mutsetse webhuruu unokatyamadza pamusoro payo.
Ndezvipi zvigadzirwa zvepeji yemvura pombi?
Zita kudzvinyirira: 0.4mpa, 0.8mpa, 1.0mpa, 1.25Mpa;
Rokunze dhayamita: φ25 ~ φ1600mm.
Zita kudzvinyirira: 0.6mpa, 0.8mpa, 1.0mpa, 1.25Mpa, 1.6mpa;
Rokunze dhayamita: φ32 ~ φ1800mm.
Pe mvura pombi chigadzirwa chigadzirwa?
(1) Yakakwira simba, yakanakisa ezvakatipoteredza kushungurudzika kutsemuka kurwisa, yakanaka inofamba kuramba.
(2) Kunaka kwakanaka uye kushanduka, kusimba kwakasimba kune isina kuenzana hwaro uye dislocation, uye inogona kuramba kudengenyeka kwenyika, madutu uye dzimwe nharaunda dzakaomarara.
(3) Ine yakanaka yekudzivirira mamiriro ekunze (kusanganisira UV kusagadzikana) uye -refu-kwenguva kupisa kwemafuta.
(4) ngura kuramba, hapana chikonzero chekuita anti-ngura kurapwa, hupenyu hwakareba hupenyu.
(5) rusvingo rwemukati rwakatsetseka, kuyerera kwemvura kushoma, kutenderera kugona kwakakura, uye mutengo wekuvaka unoponeswa.
(6) Zvakanaka kupfeka kuramba uye kupfeka kuramba.
(7) Yakadzika tembiricha kukanganisa kusagadzikana kwakanaka, kunogona kuve mune yekushisa tembiricha ye -20-40 ℃ kushandiswa kwakachengeteka, kuvaka kwechando hakukanganisike.
(8) Magetsi anonyungudika (kana kupisa kutsva) kubatana kuri nyore uye kwakavimbika, kuvakwa kwakanaka uye kugadzirisa (panguva iyo mvura isingatemwe).
(9) Inonyatsokodzera yetsika nzira dzekuchera zvekuchera uye matekinoroji matsva asina tambo senge pombi yekuisira pombi, yekudonha kwedivi, lining, pombi kutsemuka uye kunyura pasi pemvura.
(10) Polyethylene mbishi zvigadzirwa zvine chete kabhoni, hydrogen zvinhu zviviri, zvisina kukuvadza kumuviri wemunhu.
(11) Iko kushandiswa kwepamberi nano antibacterial tekinoroji, zvinobudirira zvinodzivisa kukura kwealki, mabhakitiriya uye fungi, igirini, ine hutano, kuchengetedza kwezvakatipoteredza pombi yemvura yekunwa.
1. Kubatana kwakatendeka: Polyethylene mvura yekupa mapaipi inosunganidzwa nemagetsi anopisa nyungudika; Flange yekubatana nemamwe mapaipi, ari nyore uye anokurumidza.
Maviri, yakadzika tembiricha inokanganisa kuramba zvakanaka: yakadzika tembiricha embrittlement tembiricha ye polyethylene yakadzika kwazvo, inogona kushandiswa zvakachengetedzeka mune tembiricha renji ye -35 ℃ -60 ℃. Mukuvakwa kwechando, pombi haizotsemuka nekuda kwekukanganisa kwakanaka kwechinhu.
Chechitatu, chakanakisa chemakemikari ngura kuramba: HDPE pombi inogona kumira kuora kweakasiyana emakemikari midhiya, kuvapo kwemakemikari muvhu hakuzoburitse chero kukanganisa kweipiipi.
Chechina, kuchembera kuramba, hupenyu hwakareba hwebasa: polyethylene pombi ine yunifomu yekupararira kabhoni nhema inogona kuchengetwa panze kana kushandiswa kwemakore makumi mashanu, haizokuvadzwa nemwaranzi ye ultraviolet.
Shanu, ichitenderera zvakanaka: KUCHINJIKA kweHIPPE pombi kunoita kuti zvive nyore kukombama, mainjiniya anogona kupfuura zvimisikidzo nekuchinja nzira yepombi, mune dzakawanda nguva, iko kushanduka kwepombi kunogona kudzora huwandu hwenzvimbo dzemapaipi uye kudzikisa mutengo wekuisa.
Kuderera kuyerera kuramba: Iyo HDPE pombi ine yakasununguka yemukati pamusoro uye Manning coefficient ye0.009. Iyo yakatsetseka pamusoro uye isiri-inonamira maficha eHDPE mapaipi anotendera yakakwira dhirivhari yekugona kupfuura yakajairwa tubing, ichideredza kumanikidzwa kurasikirwa uye kumwa mvura.
Zvinomwe, kubata nyore: HDPE pombi yakareruka pane kongiri pombi, kwakakurudzira pombi uye simbi pombi, nyore kubata nekumisikidza, iyo yekumisikidza mutengo weprojekiti wakadzikira zvakanyanya.
Sere, dzakasiyana nzira dzekuvaka: HDPE pombi yemvura, kuwedzera kune yechinyakare nzira yekuchera yekuvaka, asi zvakare inogona kushandisa dzakasiyana siyana trenchless tekinoroji senge pombi jacking, yedhisheni kuchera, lining, kutsemura pombi kuvaka, saka HDPE pombi application ndeye zvakanyanya kuwanda.
Post nguva: Gumiguru-08-2021